त्यस्ता केपी ओली यस्ता कसरी भए ? : बद्री पंगेनी [अन्तर्वार्ता]
बद्री पंगेनी कलाकारितासँगै राजनीतिक विषयमा पनि धेरै जानकारी राख्छन् । भन्नेले त उनलाई नेकपा निकट र त्यसमा पनि पूर्व एमाले निकट कलाकार भन्ने गरेका छन् । तर, उनी यो कुरा स्वीकार्दैनन् ।
भन्छन्, ‘हरेक नागरिकले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको अधिकार हो, तर म जुन पार्टीमा आस्था राखे पनि राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न छाडेको छैन ।’
यद्यपि चुनावी सभाहरूमा उनको उपस्थिति र गीत संगीत सुन्ने हो भने उनलाई तत्कालीन एमाले हाल नेकपा समर्थक भन्दा फरक नपर्ला ।
हालै लोकान्तरसँग पंगेनीले पूर्ण रूपमा राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न धारणा राखेका छन् ।
पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जे नहुनुपर्ने हो, जे नदेख्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ । सरकार पक्षको दलमा जुन असहमति देखिएको छ, त्यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो । यसले देशलाई मात्रै होइन विकास निर्माण र गणतन्त्र नै अप्ठ्यारो पारेको छ ।
मलाई यो कुरा अहिलेसम्म थाहा थिएन कि नेपालका नेताहरूले सत्ता र पदका लागि यतिसम्म गर्दा रहेछन् । सबैभन्दा दुःख अहिले यहाँनेर लागेको छ । स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र देशका लागि लागेको नेता खै ? अहो ! हाम्रो र हाम्रा सन्तानको भविष्य कतातिर जाला ? यसले समग्र नेपालीहरूलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ ।
नेकपा आन्तरिक किचलोमा फसेको देखिरहेका छौं । यसले देशलाई कुन दिशातिर लैजाला ? के अनुमान गर्नुभएको छ ?
नेकपाको किचलोले देश र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने देखिन्छ । यदि देशका लागि राम्रो होस् भन्ने सोच्ने हो भने उनीहरू मिल्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
नेकपाको किचलो र उनीहरूको स्वार्थ पूरा भयो भने फाइदा स्वयं नेताबाहेक कसैलाई हुनेवाला छैन । खासमा विगतमा केपी ओलीले जुन किसिमको अडान र सपना राख्नुभएको थियो त्यो देखेर यसअघिको चुनावमा जनताले उहाँसँगै उहाँको पार्टीलाई बहुमत दिएका थिए । तर, असाध्यै दुःख लाग्ने कुरा के भइदियो भने त्यस्ता केपी यस्ता कसरी भए ? यस्तो स्थिति कसरी आयो ? धेरैलाई रनभुल्लमा पारेको छ ।
तपाईं एउटा कलाकार मात्रै होइन देश र समाजका विभिन्न मुद्दामा सधैँ आवाज उठाउने व्यक्ति पनि हो, किन नेकपाको आन्तरिक विवाद र समग्र राजनीतिक निराशाको विषयमा केही नबोल्नुभएको ?
मैले कहाँ बोलिनँ ? तपाईँहरुले सोध्नुपर्‍यो नि ! भाइरल हुने कन्टेन्टहरूमा पछिल्लो समय मिडिया पछि लाग्ने गरेको छ, यस्ता कुरामा कहाँ लाग्छ ? मैले सधैँ आवाज उठाइरहेको छु ।
अहिले भर्खरै उखुको पैसा नपाएका किसानहरूको बारेमा सडकमै पुगेर आन्दोलनमा उत्रिएँ । एमसीसीको विषयदेखि सरकारका नराम्रा कामहरूमा खुलेरै विरोध गरिरहेको किन नदेख्नुभएको ?
हेर्नोस्, मलाई केही पाउँला भन्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केहि गर्नु छैन । देश बनिदिए मात्रै हुन्थ्यो, बाँकी के–के गर्नुपर्छ म सधैँ तयार छु ।
म निस्वार्थ कतिसम्म लागिरहेको छु, त्यो पनि नजिकबाट नियालिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
नेपालका अधिकांश कलाकारहरूलाई देशको स्थिति, राजनीतिक विषयवस्तु लगायतमा कुनै मतलब छैन, यो कत्तिको ठीक हो ?
ठीक होइन । कलाकारिता गर्नेहरूले समग्र देशको विषय, राजनीतिक घटनाक्रम र समाजलाई नजिकबाट नियाल्न सक्नुपर्छ ।
कला क्षेत्रले राजनीतिलाई चिन्न सकेन भने कला क्षेत्रको विकास पनि राम्रोसँग हुँदैन । कलाकारिता गर्नेले फोहोरी राजनीति मात्रै नगर्ने हो, राजनीतिदेखि जानकार नै नहुने भन्ने होइन ।
देश भ्रष्टाचारबाट झन्झन् निचोरिएको छ, राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार सधैँ चुनावमा मात्रै राम्रो देखिएजस्तो लाग्ने तर त्यसपछि सधैँ उस्तै । देशको यो हालत देखेरै युवा विदेश पलायन शुरु भएको र त्यो क्रम झन्झन् बढेको छ, यो कुराले तपाईंलाई कत्तिको भावुक बनाउँछ ?
राणा शासन चलाएको, पञ्चायत चलाएको जुन कर्मचारी संयन्त्र छ, त्यसले अहिले संघीय गणतन्त्र चलाउन सक्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छैन ।
सोही कारण देशमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार बढेको हो । कर्मचारी संयन्त्र र केही मूल कानून परिवर्तन नहुँदासम्म यो भ्रष्टाचार सधैँ रहनेछ र रहिरहन्छ । देश झन्झन् भ्रष्टाचारमा गएको सुन्दा असाध्यै दुःख लागेको छ ।
तपाईँ त देश तथा विदेश पुग्ने कलाकार । विदेशका युवाहरूसँग पनि कार्यक्रमको शिलशिलामा साक्षात्कार गर्नुहुन्छ । उताबाट युवाहरूले पठाउने सन्देश के हो ? त्यो सन्देश किन नेपालमा आएर नेपाली नेताहरूलाई सुनाउनुहुन्न ?
मैले कतिपटक भनेँ त्यो कसैले सोधेकै छैन । म सबैभन्दा धेरै बोल्ने पनि यही विषयमा हो । मैले धेरै नेतालाई भेटेको छु, त्यो बेला यसो गर्न सकियो भने देशमा युवाहरू फर्किन्छन्, उसो गर्न सकियो भने देशमा युवा तान्न सकिन्छ । विदेश पलायन रोकिन्छ भनेर कतिपटक भनेँ । तपाईंलाई थाहा छ त सुझाव सल्लाह जति भएपनि काम नगर्ने र सिस्टम नबसेपछि कसको के लाग्दोरहेछ र ?
नेपालको राजनीति देखेर कहिलेकाहीँ जेसुकै होस्, म पनि बाहिरै गएर बस्छु भन्ने सोच आउँदैन ?
यत्ति मात्रै मैले जिन्दगीमा नगर्ने भनेको हो । कलाकारितामा लागेपछि नै मैले कहिल्यै विदेश पलायनको विषयमा योजना बनाइनँ । यदि बनाउँथे भने मैले किन सार्वजनिक रूपमा नेताहरूको, भ्रष्टाचारको विषयमा बोलिरहनुपर्थ्यो ? अरू कलाकारजस्तै सर्लक्कै पलायन हुन सक्थेँ नि !
तपाईँ राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने एउटा कलाकार पनि हो, नेपालका नेताहरूले किन कामै गर्न सकेनन् ? के लाग्छ ? स्पष्ट बोल्नुस् त ?
खासमा मैले जनताको पनि दोष देख्छु । हामी जनता असाध्यै छिटो स–साना कुरामा भावुक हुने र साना कुरामा विरोध गर्ने, तुरुन्तै नेताहरूका गल्तीलाई क्षमा दिने गर्छौ । खासमा इख भन्ने छैन । हेर्नोस्, यी नेताहरूले हामीले नै जिताएर पठाएर यति गरेका हुन्, उनीहरूलाई रोक्ने पावर नेपाली जनताहरूसँग छ ।
नेपालको न्यायालय, नेपालीहरूको संस्कार, नेपाली नेताहरूको आर्थिक लोभमा लिप्त हुने लगायतका कारण पनि यो बिजोग स्थितिको सामना गरिरहनुपरेको छ ।
तपाईंलाई ओली निकट कलाकार भन्छन् नि ? प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्दा केही सुझाव दिने गर्नुभएको छ ? कलाकारहरूको चिन्ता, जनताको चिन्ता र देश विदेशमा रहेका युवाहरूको चिन्तालाई कत्तिको सुनाइदिनुभएको छ ?
म अहिले छातीमा हात राखेर भन्छु, म जसले राम्रो गर्छ त्यो निकट हो । कुनै पार्टी निकट होइन । म राम्रो गर्नेको निकट हुन चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीहरू तथा राजनीतिक दलहरूसँग भेट्दा भ्रष्टाचार, विकास निर्माण लगायतका कुरामा धेरैपटक भनिरहेको छु । मेरो चाहना देशले छिट्टै काँचुली फेरोस् भन्ने हो, अरू केही पाउनु छैन । मैले मेरो र मेरो परिवारको पेट पाल्न आफैँ पसिना बगाउनु राम्रो ठानेको छु ।
तपाईंले कहिल्यै राजनीतिमा गएर अलिकति फरक किसिमले काम गर्छु भनेर सोच राख्नुभएको छ ?
मैले राजनीति गरेर मन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कहिल्यै योजना बनाएको छैन । तर, कलाकारितामा रहेर अझै धेरै आवाज बुलन्द पार्ने सोच राखेको छु ।